DT2 သတင်း• DT2 • Downtown Dutchtown • Downtown Dutchtown ၏အနာဂတ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
အပေါ် Posted ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7th, 2021
ဤ Valentine's Day ကို Dutchtown တွင် ၀ ယ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိကုန်သည်များထံမှကြီးမားသောဆုများရရှိရန်သင်၌အခွင့်အရေးများရှိသည်။ Valentine's Day မတိုင်ခင်နေ့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အထူးအဖြစ်အပျက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပူးပေါင်းရန် Dutchtown စီးပွားရေးခရိုင် Facebook အဖွဲ့.
ငါတို့နိုင်ဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်တယ်၊ Facebook မှ Dutchtown စီးပွားရေးနယ်မြေအဖွဲ့! ဤအုပ်စုသစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးအနားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့်စျေးဆိုင်အသစ်များ၊ စာရင်းအသစ်များ၊ ရောင်းအားအသစ်များနှင့်အခြားအရာများထံမှနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများကိုသင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာသင်လုပ်ရမှာက Facebook group ထဲကိုဝင်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာကျပန်းပုံဆွဲခြင်းနှင့်ကံကောင်းသည့်နောက်လိုက်များစွာသည် Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှလက်ဆောင်လက်မှတ်များရရှိကြသည်။ အောင်မြင်သူများသည်လက်ဆောင်လက်မှတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကောက်ယူရမည်။ Dutchtown စျေးဝယ်လမ်းလျှောက်သွားပါ။
ငွေကုန်ပွီ $ #! &
Dutchtown တွင် Valentine's ပျော်စရာပို
Grand Selfie ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကိုဖြတ်ကျော်ပါ
Grand CrossDowntown Dutchtown ၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီသည်ကြီးမားသောဆုများဖြင့်ပျော်စရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့အချိုရည်နှင့်အတူတစ် ဦး selfie ယူ။ သုံးဝါကျချစ်ခြင်းမေတ္တာအက္ခရာရေးပါ။ သင်၏စာနှင့်ဓာတ်ပုံကိုတင်ပါ ဖေဖော်ဝါရီလ 12 by ။ သင်သည်ဒေါ်လာ ၂၀ ဆုလက်ဆောင်လက်မှတ်၊ ပြည့်တန်ဆာတိရိစ္ဆာန်များ၊ ချောကလက်တောင်းနှင့်အရက်များပါသည့်တောင်းခံထားသည့်ခြင်းတောင်းကိုသင်ရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်မိနစ် ၃၀ ရှိသောစုံတွဲများအတွက်ဓာတ်ပုံ ၅ ခုနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပါလိမ့်မည်။
Boutique ကိုမမေ့ပါနှင့် 4213 ဗာဂျီးနီးယားရိပ်သာလမ်းမှာ ချစ်သူများနေ့ ရယူထားသောနှင့်အထူးနှင့်အတူဖေဖော်ဝါရီလ 13 ရက်နေ့တွင်။ မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ချောကလက်အချို့ကိုသင် ၀ ယ်ယူပြီးပျော်မွေ့ပါ။ စျေးဝယ်သူများသည်အခမဲ့လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဒေါ်လာ ၅၀ သုံးလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာကျနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကံကောင်းသောဈေးဝယ်သူတစ် ဦး ကမနက်စောစောမနက် ၉ နာရီမှညနေ ၅ နာရီထိ Forget Me Not မှကုန်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်လက်ဆောင်ခြင်းတောင်းကိုရလိမ့်မည်။
စုံလင်လှတဲ့ Pastry မှာ Valentine ရဲ့ဆက်ဆံမှု
Pasုံ pastry, တည်ရှိသည် မြို့ပြအိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမစားသည်, Valentine's Day မတိုင်မီတစ်ပတ်လုံးအထူး treat ည့်ခံကျွေးမွေးသည်။ ကိတ်မုန့်များ၊ အသီးသေးသေးများ၊ ချောကလက်ဖုံးလွှမ်းထားသောစတော်ဘယ်ရီနှင့်အခြားအရာများကိုရှာပါ။ Pasုံ pastry သည်နံနက် ၇း၃၀ မှဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှသောကြာနေ့အထိနှင့်စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၂ နာရီအထိဖွင့်သည်။
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နှင့် ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10th, 2021 .
စားဖိုမှူး Curtis ဟာ catering လုပ်ငန်းမှာစတင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၂၀ ၏နွေရာသီတွင်သူသည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် မြို့ပြအိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမစားသည် Juanita's ကိုဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သူ၏အဘွား (အတ္တဆန်သော Juanita) နှင့် New Orleans ၏ creole အစားအစာတို့၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူ၏အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်များကိုပြသရန်။ သူ၏ Downtown Dutchtown တည်နေရာ၏အောင်မြင်မှုသည် ၁၈၃၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်မှ ၁၈၃၃ ခုနှစ်အထိ North Taylor ရိပ်သာလမ်းကိုမြောက်စိန့်လူးဝစ္စတွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
Juanita's သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှတနင်္ဂနွေနေ့၊ ည ၁၁း၃၀ နာရီအထိဖွင့်သည်။ COVID-11 ကြောင့်အိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမသည် (ယခုနွေးထွေးသောနေ့ခင်းများတွင်လမ်းဘေးထိုင်ခုံများနှင့်အတူ) သာထုတ်ယူသည်။ Juanita's မှတစ်ဆင့်လည်းပို့နိုင်သည် GrubHub, DoorDashနှင့် Postmates.
အထူးသဖြင့်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောကာလအတွင်း Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သင်၏အထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်နှစ်၏အစောပိုင်း၊ အေးသောလများအတွင်းစားသောက်ဆိုင်များသည်ရုန်းကန်နေကြသည်။ ညစာအမိန့်ပေးရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းအားကောင်းအောင်ရှင်သန်နိုင်အောင်သင်ကူညီနိုင်သည်။ Juanita's Creole Soul သို့မဟုတ်အခြားကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ရာများထံမှကြိုတင်မှာယူမှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပို့ခြင်းကိုမှာယူပါ Dutchtown စားသောက်ဆိုင်များ သင်၏နောက်မုန့်ညက်ဘို့။ အချို့စားသောက်ဆိုင်များသည်ကန့်သတ်ချက်ရှိသောစားသောက်ဆိုင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးနေသည်။
DT2 DutchtownSTL.org သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်အရင်းအမြစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ သင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထူထောင်ထားလျှင်၊ dutchtownstl.org/business ကျနော်တို့ပူဇော်ဖို့ရှိသည်သောအရာကိုကြည့်ရှုရန်။ သင်၏စီးပွားရေးကို Dutchtown Business Showcase တွင်ဖော်ပြလိုလျှင်၊ ငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
ဤ Dutchtown Business Showcase ဗီဒီယိုကို Chip Smith မှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Grand Cross, Downtown Dutchtown တွင်လည်းတည်ရှိသည်။ စာရင်းသွင်းပါ DutchtownSTL ယူကျု့ချန်နယ် မကြာမီလာမည့် Dutchtown Business Showcase ကိုဖမ်းယူရန်!
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown စီးပွားရေး Showcaseနှင့် Dutchtown CID. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 6th, 2021 .